Ifulethi elinamagumbi amabili elinethala, idamu lokubhukuda, i-wi-fi - I-Airbnb
Ifulethi elinamagumbi amabili elinethala, idamu lokubhukuda, i-wi-fi
Acireale, Catania, i-Italy
Ifulethi elinamagumbi amabili, izinga lengadi, endaweni yokuhlala enamachibi okubhukuda, ingadi, ulwandle nokubukwa kwe-Etna.
Ungakwazi ukuphumula eduze kwechibi ujabulele umbono we-Etna futhi uhogele iphunga lolwandle.
Ifulethi elinamakamelo amabili elisezingeni lengadi, elinamagumbi okulala amabili, ikhishi-igumbi lokuhlala elinombhede usofa (ububanzi obuyi-105 cm), igumbi lokugezela, ithala elizimele elinetafula nezihlalo ezibheke olwandle.
Ifulethi elisezingeni lengadi, lijabulela umbono omuhle weMount Etna, ulwandle kanye nengadi yendawo yokuhlala.Ifulethi linekhishi elihlome ngokuphelele, isimo somoya, i-TV. Ngesicelo umbhede wengane kanye nesihlalo esiphezulu.
Ifulethi lisendaweni yase-S. Tecla di Acireale, idolobhana elincane labalimi nabadobi. Ikakhulukazi izithelo ezisawolintshi kanye nolamula "verdello" odumile, ojwayelekile waseSicily, ziyatshalwa. Edolobhaneni uzothola konke okudingayo: izitolo ezinkulu, amabhikawozi, abagwayi, amahhovisi eposi, ama-ice cream parlors, imigoqo, ingasaphathwa yezindawo zokudlela ezahlukahlukene nama-pizzeria lapho ungajabulela khona amakhono amaningi okupheka. Isikhundla esihle kakhulu sedolobhana lase-S. Tecla sikuvumela ukuthi uvakashele zonke izindawo zokungcebeleka zabavakashi ezidume kakhulu (phakathi kwama-Acireale amaningi, Catania, Taormina, Etna and Nebrodi Park, Syracuse, Ragusa and Piazza Armerina).
Mina nozakwethu sazi ukuthi sikhona emini nakusihlwa ukuze sikusize noma ukuze uthole iseluleko esiwusizo ngamaholide akho.Phakathi kwezinsizakalo zethu kungenzeka kube nezivumelwano nezindawo zokudlela namabhishi endaweni, ukudluliselwa nohambo epaki i-Etna noma ngomkhumbi. isikebhe, ibhayisikili sokuqasha nokunye okuningi ukwenza iholide lakho kujabulise.
Mina nozakwethu sazi ukuthi sikhona emini nakusihlwa ukuze sikusize noma ukuze uthole iseluleko esiwusizo ngamaholide akho.Phakathi kwezinsizakalo zethu kungenzeka kube nezivumelwa…